Ny PayPal dia vavahady ho elektronika fandoavam-bola amin'ny alalan'ny izay ampiasaina famindrana vola amin'ny alalan'ny Aterineto. PayPal manompo toy ny elektronika hafa ny fomba nentim-paharazana, ohatra, ny taratasim-bola sy ny baiko fa ny fandoavam-bola.
Ny PayPal logo
Ny PayPal kaonty dia afaka ny ho ara-bola miaraka amin'ny taratasy elektronika bola avy amin'ny banky na ny carte de crédit. Ny PayPal dia ohatra iray amin'ny fandoavam-bola ho an'ny asa fanelanelanana, izay manamora ny tontolo e-commerce.
PayPal manao fandoavam-bola fanodinana ho an'ny online sales, auctions toerana, sy ny ara-barotra hafa mpampiasa, izay noho ny fiampangana ny sarany. Fiampangana indraindray ihany koa ny raharaham-barotra saran'ny fandraisana ny vola (iray isan-jato ny vola naniraka plus fanampiny raikitra vola). Ny haavon'ny saram dia miankina amin'ny vola ampiasaina, ny fandoavam-bola safidy ampiasaina, ny firenena ny mpandefa, ny firenena, ny mpandray, ny vola nalefa tany sy ny karazana tantara ny tombontsoa.
Ankoatra izany, eBay atao amin'ny fividianana karatra amin'ny alalan'ny PayPal mety handray ny "hanova ny vola ny raharaham-barotra", raha ny mpivarotra any amin'ny firenena hafa, toy ny carte de crédit issuers no avy hatrany nampandre ny firenena niaviany ny mpivarotra.
Ny 3 oktobra, 2002, PayPal lasa tanteraka nanana fanampiny amin'ny eBay. Ny orinasa manana ny foibeny ao San Jose tany amin'ny faritra Avaratr'i Californie ao amin'ny United States. Ny orinasa koa dia zava-dehibe ny asa ivelan'ny.E.Ny sy tao Chennai, Dublin, Berlin sy ny Tel Aviv. Tamin'ny jolay 2007, miasa ao amin'ny rehetra an'i Eoropa. Tamin'ny 17 Martsa 2010, PayPal miditra ao fifanarahana miaraka amin'i Shina UnionPay (ny KAPOAKA) , ny fahafahana misafidy Shina noho ny famoahana ny sary nahazoan-cards, mba mamela ny mpanjifa Sinoa mba mampiasa PayPal miantsena an-tserasera. PayPal mikasa hanitatra ny mpiasa ao Azia 2000 amin 'ny faran' ny taona.
1 Ny tantaran'ny PayPal
1.1 Daty Manan-Danja
1.2 Tany am-boalohany
1.3 Fividianana amin'ny eBay
1.4 Amin'izao fotoana izao
1.5 Seza PayPal
2 Ny fiarovana
3 Ny fitsipika izay mihatra PayPal
4 Azo atao scam
5 Ny jono sy PayPal
Ny tantaran'ny PayPalHanova
1998: Petera Thiel sy Max Levchin nanangana ny orinasa Confinity.
1999: Ny Confinity manolotra ny voalohany dikan PayPal, ny rafitra momba ny elektronika fandoavam-bola.
2000: Confinity dia azony ny X.com Corporation.
2001: X.com mahatonga ny voalohany hanolotra ny mizara amin'ny NASDAQ sy ny orinasa anarana toy ny PayPal.
2002: eBay mahazo PayPal ho 1,5 lavitrisa. $ . amin'ny boloky hazo.
2005: PayPal mahazo fandoavam-bola VeriSign.
2007: Manambara ny fiaraha-miasa miaraka MasterCard.
2008: Paypal nividy Hosoka ny Siansa, ny startup amin'ny Isiraely.
Amin'izao fotoana izao asa ny PayPal dia ny vokatry ny fiombonana eo amin'ny orinasa sy Confinity X.com. Ny Confinity naorina tamin'ny volana desambra 1998 amin'ny Max Levchin, Petera Thiel, Lioka Nosek, sy Ken Howery. Ny X.com naorin'i Elon Musk tamin'ny Martsa 1999, ary niara-niasa tamin'ny voalohany toy ny internet tolotra ara-bola ny orinasa. Samy Confinity sy ny X.com nanomboka ny tranonkala tamin'ny faramparan'ny taona 1999. Orinasa roa ireo any amin'ny University Avenue tao Palo Alto.
Tamin'ny voalohany ny vohikala Confinity mifantoka amin'ny fitambaran'ny vola avy Rofia Mpanamory amin'ny fandoavam-bola amin'ny alalan'ny e-mail ho fomba fandoavam-bola, raha ny X.com ny tranonkala voalohany misongadina ara-bola, asa amin'ny fandoavam-bola amin'ny alalan'ny e-mail toy ny mahazatra dia midika hoe ny fandoavam-bola.
Amin'ny Confinity, maro ny tany am-boalohany sorisory ireo mpianatra ao Amin'ny Stanford Review Oniversite, izay naorin'ny Petera Thiel sy ny Oniversite Illinois ao Urbana-Champaign, naorin'i Max Levchin. Avy amin'ny lafy X.com ny Elon Musk nanakarama isan-karazany ny ara-teknika sy ny raharaham-barotra ny mpiasa, anisan'izany ny maro izay nanao fahombiazana ho an'ny orinasa, toy ny Amy Klement, Sal Giambanco, Sanjay Bhargava sy Jeremy Stoppelman.
Ny manilika izay mety ho hosoka ny fidirana amin'ny mandeha ho azy rafitra, PayPal nampiasa ny rafitra (cf. CAPTCHA) izay ny mpampiasa miditra ny isa avy amin'ny mason'ny sary, izay namorona ny fitsapana ny Tapaky ny volana Levchin.
EBay nijery ny mitsangana ao amin'ny boky an-tserasera fandoavam-bola, sy atao an-tserasera rafitra fandoavam-bola amin'ny aterineto auctions. eBay nividy Billpoint tamin'ny May 1999, mialoha ny fisian ' PayPal. EBay nanao Billpoint ofisialy ny rafitra fandoavam-bola, ny anarana azy ho "eBay fandoavam-bola", fa tapaka ny fiasan'ny ny Billpoint noho ny fahasarotan'ny ny mba nanao fandoavam-bola afa-tsy ho an'ny eBay auctions. Noho izany antony izany, PayPal efa tafiditra ao ny maro hafa auctions noho ny Billpoint. Tamin'ny volana febroary 2000, PayPal fanompoana efa eo ho eo ny eo ho eo ny 200.000 auctions isan'andro raha Billpoint (beta) nanana afa-tsy 4,000 auctions. Tamin'ny aprily 2000, mihoatra noho ny 1,000,000 auctions nataon ' ny asa fanompoana PayPal. Nisy avy hatrany ny fanovana ny toe-tsaina taorian'ny fanafihana ny 11 septambra 2001 izay lasa voalohany dot-com ny IPO.
Fividianana amin'ny eBayHanova
Ny volana oktobra 2002, PayPal no nahazo ny orinasa ny eBay nandritra ny 1,5 lavitrisa. dolara. Mazava ho azy, PayPal no be mpampiasa indrindra ny fomba fandoavam-bola any amin'ny tany maherin'ny 50% ny mpampiasa eBay. Ka mifaninana amin'ny rantsa-mangaikan'ny eBay Billpoint, c2i , ny Citibank, izay ny fanomezana ny asa nijanona tany amin'ny faramparan'ny 2003 tany, ary Yahoo! PayDirect, izay ny asa fanompoana io dia nijanona teo amin'ny faran'ny taona 2004. Western Union nanambara tamin'ny desambra 2005 fa nijanona ny BidPay fanompoana, fa avy eo nivarotra izany tamin'ny taona 2006 mba CyberSource Fikambanana. Ny BidPay nijanona ny asa maharitra tao amin'ny 31 desambra 2007. Mpifaninana sasany izay manolotra ny sasany amin'ireo asa PayPal, toy ny Google Checkout, Wirecard, Moneybookers, 2Checkout.com, CCNow sy Kagi, nanohy ny fanaovana raharaham-barotra, na dia eo aza ny zava-misy fa eBay mitaky toerana rehetra ao Aostralia sy ny Royaume-uni maintsy manolotra PayPal asa. Farany eBay nanentana ny fepetra sy nanambara fa ny tsena tany Aostralia dia manana PayPal toy ny iray amin'ireo (fa tsy voatery ho ny hany) fomba fandoavam-bola. Ireo manaiky fomba fandoavam-bola ho tafiditra amin'ny banky mipetraka, taratasim-bola sy ny fandoavam-bola baiko.
Tamin'ny volana janoary 2008, PayPal nanaiky ny hahazo ny Hosoka ny Siansa, ny tsy miankina ny Israeliana start-up orinasa miaraka amin'ny traikefa tamin'ny fitaovana an-tserasera an-tserasera ny hosoka, dia ho 169 tapitrisa. $ mba hanatsarana eBay sy ny format manan-tompo ny fitantanana ny rafitra PayPal ary mba hanafainganana ny fampandrosoana ny fanatsarana ny fomba ny mamantatra hosoka. Tamin'ny volana novambra 2008, ny orinasa nividy Volavolan-dalàna Ahy taty Aoriana, ny fandoavam-bola an-tserasera fanodinana orinasa ny carte varotra, nampiasaina maherin'ny 1000 ny mpivarotra ao amin'ny USA.
Ny fitambaran'ny boky ny fandoavam-bola PayPal ary ny fitambaran'ny sarobidy ny varotra nahatratra 60 lavitrisa tamin'ny taona 2008, ny tahan'ny nitombo 27% avy ny taona teo aloha. Ny orinasa dia mbola mifantoka amin'ny fampandrosoana iraisam-pirenena.
Amin'izao fotoana izaoHanova
Amin'izao fotoana izao, PayPal miasa ao 190 tsena sy mitantana ny 184 tapitrisa ny kaonty, maherin'ny 73 tapitrisa ireo mavitrika. PayPal mamela ny mpanjifa mba handefa, mandray, ary mitana vola tamin'ny 19 sandam-bola manerana izao tontolo izao. Ireo vola ireo ao amin'ny Australian dollar, Canadian dollar, ny Sinoa yuan, Euro, ny pound sterling, Japanese Yen, Czech koruna, Danish Krone, Hong Kong Dollar, hongroà forint, Israeliana Vaovao Sekely , Mexican Peso, New Zealand Dollar, ny zavatra krone, ny poloney zloty, Singapore Dollar, ny Swedish krona, Soisa fifanaraham-piaraha-miasa sy ny Dolara. PayPal miasa eo an-toerana ao amin'ny firenena 13.
Ny vola miditra PayPal nandritra ny telovolana voalohany 2009 dia 643 tapitrisa, 11% ny raha oharina amin'ny taona teo aloha. 42% ny vola miditra ao amin'ny telovolana voalohany 2009, dia nisy afa-tsy avy amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny boky tanteraka ny fandoavam-bola vavahady (TPV) ny telovolana voalohany 2009, izany dia efa ho 16 miliara dolara, 10% mitombo isan-taona.
Ny 11 Martsa 2009, ny mpandalina Jaona Donahoe nanambara fa PayPal mety ho ny lehibe indrindra mpamily ny vola miditra amin'ny eBay. SISINY dia nanambara fa PayPal ihany no ho rafitra ny fandoavam-bola ho an'ny Iphone Fampiharana izao tontolo izao, izay nanomboka tamin'ny 1 aprily 2009.
Na dia eo aza ny zava-misy fa ny foiben'ny orinasa ny PayPal dia hita ao San Jose, ny asa ny PayPal dia mitoetra akaiky ny Omaha, Nebraska, izay ny orinasa mampiasa olona maherin'ny 2000 hatramin'ny taona 2007. Ny eoropeana foiben'ny PayPal ao Luxembourg sy iraisam-pirenena ny foiben-toerany any Singapore. Farany, ny orinasa vao nanokatra ny teknolojia foibe ao Scottsdale, Arizona, sy Chennai (India).
Amin'ny ezaka mba hampitomboana ny fiarovana ny mpampiasa, ny PayPal dia namorona roa-dingana fomba fidirana (log-in). Ny mpampiasa raha maniry izy dia mety koa ny mampiasa ny solonanarana sy ny tenimiafina ihany koa ny mampiasa ny PayPal fiarovana manan-danja. Raha tsorina dia araka ny mpampiasa miditra ny solonanarana sy ny tenimiafina ny nitarika ny pejy izay tokony hameno ny fiarovana manan-danja. Rehefa manao izay tsy manana fahafahana miditra ny kaonty. Amin'ny tranga izay ny mpampiasa dia nisafidy ny hampiasa ny fiarovana manan-danja nefa tsy manana na very , ilay pejy, fa raha ny tokony ho izy dia hameno ny isan ' ny fiarovana manan-danja afaka mifidy ny rohy very na nanadino ny fiarovana manan-danja. Tsy ianao no ho nangataka mba hamaly ny mpitandro ny fanontaniana mba manamarina ny maha-azo itokiana ny.
Ny fiarovana manan-danja no tena fitaovana kely mitovy habe amin'ny USB hazokely, ary hitondra ny kely ny rano ny vato krystaly asehoy sy bokotra kely. Isaky ny miezaka ny mpampiasa miditra ao an-kaonty, rehefa nangataka ny fiarovana manan-danja izy dia manery ny bokotra eo amin'ny fitaovana sy manoratra ny pejy ny enim-tarehimarika fehezan-dalàna izay hita teo amin'ny efijery amin'ny fitaovana. Ny fitaovana izay afaka mividy avy amin'ny PayPal website. Ny vola lany amin'ny dia 5$, ary izany dia tonga ny mpividy ny alalan ' ny paositra. Rehefa mandray ny mpampiasa ny fitaovana azo alefa amin'ny PayPal tranonkala amin'ny alalan'ny miditra ao amin'ny serial number hita ao ambadiky ny fitaovana.
Zava-dehibe ny milaza fa ny fiarovana manan-danja afaka ny amin'izao fotoana izao ny fampiasana azy io afa-tsy ireo mpampiasa izay miorina ao Aostralia, any Alemaina, Kanada, angletera sy i Etazonia.
Ny fomba faharoa mba hampitombo ny mpampiasa kaonty ny fiarovana ny MTan (Finday raharaham-Barotra Authentication Maro). Raha tsorina dia isaky ny miezaka ny mpampiasa hanao ny raharaham-barotra dia tonga ny finday hafatra an-tsoratra avy amin'ny PayPal izay ahitana ny antsipiriany momba ny raharaham-barotra ary koa ny tenimiafina. Ny teny fanalahidy fa ny mpampiasa dia tsy maintsy manamarina ny PayPal pejy mba ho ny raharaham-barotra mba ho vita.
Na izany aza, ny fiarovana ny teknika io dia miankina amin'ny fiarovana ny rafitra ny finday telephony.
Ny fampiasana ny MTan tsy misy enta-mavesatra ara-bola, ankoatry ny fiampangana niorina ny sms ny mpamatsy ny finday fifandraisana hametraka.
Ny fitsipika izay mihatra PayPalHanova
Ny dingana voalohany any Eoropa PayPal no nametraka tamin'ny 2004 tany Angletera tamin 'ny anaran' PayPal (Eoropa) toy ny issuer ny e-ny vola (Vola Elektronika Issuer) miaraka amin'ny fahazoan-dalana avy amin'ny asa ara-bola ny Fanjakana Mitambatra.
Na izany aza, niova izany rehefa tamin'ny taona 2007 ny orinasa nifindra tany Luxembourg. Misy, ny orinasa nametraka ary miasa amin'izao fotoana izao toy ny banky amin'ny anarana PayPal (Eoropa) Sàrl et Cie SCA miaraka amin'ny fahazoan-dalana avy amin'ny vaomiera mpanara-maso ny Komity de du Secteur-Bola.
Any Amerika, na izany aza, dia tsy marina. Na dia PayPal manana fifanekena ny fampiasana tsy mivantana nifehy ny governemanta Amerikana rehefa miasa ho toy ny mpanelanelana ho fandoavam-bola. Ny lalàna dia tsy mazava toy ny rehefa ny PayPal miasa ho toy ny banky, toy ny raharaham-barotra ara-bola, asa fanompoana na ny distributor ny vola. PayPal mety ho eo ambany fifehezan'ny fanjakana, fa ny lalàna miovaova arakaraka ny raharaha ny raharaha(ny banky, ny raharaham-barotra ara-bola, asa fanompoana, distributor ny vola).
Ny lalàna dia mitovy ny PayPal dia hilaza amin'ny P2P varotra natao tamin'ny debit na carte de crédit. Ara-dalàna ho an'ny varotra amin'ny karatra fandoavana na fisintonana vola napetraka avy manokana ny fomba fiasa noho ny famahana billing fahadisoana, fa nindrana ny fetra sy ny fa. Na izany aza PayPal satria miasa amin'ny maha-kafa fandoavam-bola ao amin'ny hetsika fa ny mpampiasa dia tsy mampiasa debit karatra avy eo ny mpampiasa dia afaka mora foana ny fahalavoana niharam-boina mba hamonoana ny olom-pirenena .
Azo atao scamHanova
Vola varotra amin'ny alalan'ny PayPal misy atahorana ny hosoka no mahatonga ny tsy manana ny maha toetry ny e-varotra, ary ny tsy fisian'ny fitsipika ho an'ny varotra avy amin'ny lafiny PayPal. Ao amin'ny hetsika izay ny antoko fahatelo mahazo ny fidirana amin'ny olona iray ny PayPal kaonty sy hanao raharaham-barotra ny fampiasana ny debit ny carte de crédit ny tena tompony, dia PayPal no tompon'andraikitra ity hetsika ity. Raha, na izany aza, ny fanafoanana avy amin'ny petra-bola ny kaonty amin'ny PayPal, ary tsy PayPal na ny banky dia tsy maintsy hiverina ny vola, toy ny mpampiasa no nanaiky ho toy ny fihetsika ao amin'ny fifanarahana eken'ny PayPal.
Koa dia tsara lazaina ihany fa PayPal ny fototry ny lalàna federaly afaka ny tsy hamoaka ny antsipirihany momba ny kaonty mpihazona ny PayPal, na izany aza, ny mpampiasa dia afaka misafidy mba hampandre ny hafa ny mpihazona PayPal ny fisian ' ny tantara.
Ao amin'ny hetsika fa ny tantara dia lasa foto-kevitra ny hamonoana na tsy nanome alàlana ny fampiasana, avy eo PayPal mametraka ny kaonty ao amin'ny toe-javatra voafetra ny fampiasana. Amin'ity tranga ity, ny mpampiasa dia tsy maintsy miditra ao an-kaonty, hanova ny tenimiafina, mamorona fiarovana fanontaniana sy hanamafy ny fifandraisana an-tariby na an-telefaonina, na amin'ny e-mail.
Ny jono sy PayPalHanova
Toy ny ao amin'ny toerana hafa rehetra, izay mampiasa ireo mpampiasa ny kaonty, amin'ny PayPal, dia misy ny mety ny elektronika fanjonoana. Ka PayPal milaza mpampiasa tsy mba hanome ny olona noho ny antony ny kaonty vaovao, ary koa ny fomba ianao dia tsy manontany ny mpampiasa ny mandefa tantara vaovao amin'ny alalan'ny e-mail. Ny PayPal noho izany antony izany no namorona ny sehatra vaovao ho an'ny mpampiasa (https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Marketing/securitycenter/antiphishing/CanYouSpotny Jono-any ivelany). Hafa atahorana e-jono dia mitovy sehatra kaonty fidirana PayPal. Satria PayPal lasa be mpahalala sy ampiasain'ny maro loatra ny olona, maro ny vohikala izay miasa araka ny electronic manana toeram-pivarotana kely sehatra mivantana rohy Paypal, ka fa ny fandoavam-bola dia natao mora kokoa.
Maro mampidi-doza toerana dia efa napetraka ny sehatra kely mifandray amin'ny pejy, fa raha ny mpampiasa miezaka miditra ao, ny hany afaka atao dia ny mandefa ny solonanarana sy ny tenimiafina ny mpamorona ity ratsy toetra namany sary. Mba hiadiana amin'ny trangan-javatra toy izany, ny PayPal dia vondrona iray manokana ny olona izay foana ny fiatrehana ity olana ity.
https://cms.paypal.com/uk/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=en_GB Archived Martsa 26, 2016 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=PayPal&oldid=1023615"
Dernière modification le 12 Aogositra 2021, à 10:32
Voaova farany tamin'ny 12 Aogositra 2021 amin'ny 10:32 ity pejy ity.